Abenzi base China AY Series Centrifugal Oil Pumps kanye nabaphakeli | IKAIQUAN
Amaphampu we-AY chungechunge we-centrifugal aklanyelwe futhi athuthukiswa ngokususelwa kumaphampu wohlobo oludala we-Y. Kuluhlobo olusha lomkhiqizo ukuhlangabezana nesicelo sanamuhla sokwakha. Inokusebenza okuphezulu futhi Iphampu yokonga amandla.
Amaphampu we-AY chungechunge we-centrifugal aklanyelwe futhi athuthukiswa ngokususelwa kumaphampu wohlobo oludala we-Y. Luhlobo olusha yomkhiqizo ukuhlangabezana nesicelo sanamuhla sokwakha. Inokusebenza okuphezulu futhi Iphampu yokonga amandla. Esimweni sokungathinti ukushintshana komkhiqizo, sisebenzisa kahle ezinye izingxenye ezingenangqondo ukwenza kube ngcono.
1. Ngokuthola umzimba, sifaka imizimba ethwele engu-35,50,60 yepompo yohlobo oludala nge-45,55,70 ethwele imizimba ethembeke kakhulu.
2. Sebenzisa amamodeli we-hydraulic asebenza kahle kakhulu ngezingxenye zokuhamba kwe-hydraulic kanye namamodeli akhona manje Ukusebenza kahle okungu-5 ~ 8% kunamamodeli amadala.
3. Uhlobo lwe-AY lohlobo lwamaphampu ohlobo lwamafutha, ubukhulu bokufakwa, ukumbozwa kokusebenza, isigaba sezinto ezibonakalayo ayiguqulwanga. Kuyinto elula ukuvuselela amaphampu amadala.
4. Izakhi eziphakeme ezijwayelekile zisetshenziselwa umkhiqizo ochungechunge eziningana.
5. Indaba isetshenziswa ngokunembile. Futhi ikakhulukazi i-class2 ~ 3 impahla. Sandisa izinhlobo ezimbili ze impahla, insimbi yensimbi nensimbi yensimbi, yezingxenye ezinjengokuthwala umzimba ukuze iphampu libe ifaneleke kakhulu endaweni ebandayo noma ezimeni zomsebenzi njengaphandle, olwandle nokunye.
6. Kunezinhlobo ezintathu zamafomu wokupholisa, ukubanda komoya obandayo, ukupholisa umoya fan namanzi ukupholisa. Izinga lokushisa lomsebenzi lihlukile ngokuya ngezimo zomsebenzi ezihlukile. Umlandeli womoya ifomu lokupholisa lilungele ikakhulukazi indawo okungukushoda kwamanzi ahlanzekile.
7. Amaphampu wohlobo lwe-AY anekhwalithi engcono ngemuva kokubuyekeza nokwenza ngcono ezinye izingxenye ngokuya nge- amakhasimende imibono.
Kunezinhlobo ezingama-27 zamaphampu kawoyela we-AY nokufakwa kokusebenza:
Amandla: Q = 2.5-600m3 / h
Inhloko: H = 20-670m
Isimo somsebenzi: t = -45 ~ = 420 (multistage pump -20 ~ = 200)
Izinga lokushisa lomsebenzi (t): -20 ~ + 420
Iphampu yochungechunge lwe-AY isetshenziselwa ukucwenga i-petroleum, imboni ye-petrochemical, imboni yamakhemikhali nokunye izicelo zokuletha i-petroleum ngaphandle kwezinhlayiya eziqinile, i-LQG nokunye okuphakathi. Ifaneleka ngokwengeziwe ukuletha uketshezi lokushisa oluvuthayo, oluyiziqhumane noma olunoshevu.
Langaphambilini KGD / KGDS Series Kuqondile Pipe Pump
Olandelayo: I-KD / KTD Series Multistage Centrifugal Pump